Photos Undelete ka Memory Card
Sida loo Undelete Photos ka Memory Card A
Si kasta oo ay u undelete sawiro ka kaadhka xusuusta ah?
Sida loo undelete sawirada kaadhka xusuusta?
1 hab kasta oo undelete sawiro ka kaadhka xusuusta ah?
si qalad ah waan tirtiray oo dhan sawiro ka camera aan, dhab ahaantii waxaan uun rabnaa in aan mid ka mid la tirtiro in u muuqataa ma wanaagsana. Laakiin haatan oo dhan photos ee New Year ee Xaawa iyo Christmas waxaa la tirtiray. Ugu xun oo dhan, sawiro ka tconvert dhowaan Virgin Islands British ah si ay ugu dabaal 70aad dhalashada naga aabihiis tageen! Maxay tahay inaan sameeyo! Si kasta oo ay u undelete sawiro ka kaadhka xusuusta? Caawimaad kasta oo doona in la weyn mahadnaqayo!
Waxay u egtahay yaqaan? Tani waxay ku dhawaad ​​ku dhaca qof kasta. Sidaas ha argagixin. Waxaad aadan keligaa, oo halkaas waa habka ugu runtii si ay kuu caawiyaan sawirada undelete ka kaadhka xusuusta.
Waxa ugu muhiimsan in aad shido sida wadnaha waa: Jooji si degdeg ah qaadan wax sawiro leh camera ama qalab kale oo haysta kaadhka xusuusta aad. Goobta degan ee photos tirtiray waxa kaliya ee lagu calaamadeeyay sidii si xor ah u sawiro cusub. Haddii aanay overwritten by files kale, waxaad si fudud u soo kaban karto iyaga. Sidaa darteed, waa mid aad u muhiim ah in aad asalka kaadhka xusuusta ka dib markii aad sawiro aad laga badiyay. Next, aynu hubiyo sida inuu ka soo kabsado files tirtiray ka kaadhka xusuusta aad talaabooyinka.
2 Sidee loo undelete sawirada kaadhka xusuusta?
Ka sokow si fiican ilaalinta kaadhka xusuusta aad, waxa kale oo aad u baahan tahay qalab undeleting sawir inay kaa caawiyaan inaad hesho dib u sawirada aad tirtiray. Waxaad isku dayi kartaa Wondershare Photo Recovery , ama Wondershare Photo Recovery for Mac haddii aad isticmaalayso X. Mac OS kabashada sawir Tani waxay taageertaa oo dhan qaabab caamsan ee sawirada aad, iyo sidoo kale dib u soo kabashada ka qalab kala duwan sida camera, fiidiyo, iPod, USB drive, telefoonka gacanta, music ciyaaryahan, iyo in ka badan.
Sidoo kale, waxaad ka heli kartaa nooca maxkamad si xor ah u iskaan aad sawiro lumay oo iyaga ku eegaan mid mid si uu u hubiyo tayada ka hor inta aanad bixin.
Waxaad kartaa undeleted sawiro ka kaadhka xusuusta aan loo eegayn waxaad iyaga laga badiyay ay sabab u tahay:
»Files dhaco tirtiray ka kaadhka xusuusta
»formatted kaadhka xusuusta
card »xasuusta helay kharribeen ama geli
Qaar kale »
Kaliya 3 tallaabooyin ay ku undelete sawiro ka kaadhka xusuusta ee Windows ama Mac
Step1 . Connect aad kaadhka xusuusta ama camera in computer ka iyo in la hubiyo in kaarka lagu ogaan karaa. Orod barnaamijka dooro kaarka si scan.
Step2 . Ka dib markii iskaanka, Xiisaha iyo xaqiijin haddii files doonayo waxaa la helay.
Step3 . Fiiri sawirada iyo bilaabaan inay soo kabsadaan.
Fiiro gaar ah: Ha mar badbaadin xogta soo kabsaday kaarka. Raadi meel kale, waayo, sida kombiyuutarka ama disk kale oo bannaanka ah, si loogu tixgeliyo ammaanka.
> Resource > Memory Card Data Recovery > Sida loo Undelete Photos ka Memory Card A